ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 37.4 လောကဓံလှိုင်းလုံးအောက် မြဲခဲ့တဲ့ တွဲလက်များ
ဒီလို ဘ၀ကနေ အောင်မြင်မှုတွေရလာတာလေးစားစရာပါ။
u need to give message to students when u visted . after that they can do same way like as you. I think u need to explain clear to them....
ကြမ်းတမ်းမှုအပြည့်နဲ့ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသမျှကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ်။ အဲဒီ ဒါဏ်တွေက ခုလိုမာကျောရင့်ကျက်သူ နဗနဖြစ်လာစေတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ သမခေတ်မဟုတ်ပေမဲ့ သိပ်မကွာဘူးထင်တယ်။ တိုးရ၊ နီးစပ်ရာ ရှာရ၊ လှူရတန်းရတယ်။ အိမ်က ၁၀ တန်းပြီးတာနဲ့ တန်းခိုင်းတာဘဲ။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် မင်းကအတန်းပညာသာ ၁၀ တန်းအောင်တာ ဘ၀ ပညာမှာ မူလတန်းပဲရှိသေးတယ်။ ခုတော့ အတန်းပညာကော ဘဝပညာကော တပြိုင်ထဲရနေတယ်။
ကိုနဗန အခုလို အခြေအနေထိရောက်အောင်